Android 11 na-abịa LG V60 ThinQ 5G site na mmelite ohuru | Gam akporosis
Gam akporo 11 na-abịa na smartphones ndị ọzọ. Oge nke a bụ oge nke LG V60 ThinQ 5G iji nweta mmelite ngwanrọ nke na-agbakwunye ụdị mbipụta nke Google OS maka ekwentị mkpanaaka, nke bụ ihe kachasị ọhụrụ na onye buuru ụzọ nke gam akporo 12 a na-atụ anya ya, nke ga-abịarute n'afọ a.
Ọnụ a na-anabata ngwungwu ngwa ngwa ọhụụ nke na, na-abịarute na ozi ọma na mmụba dị na gam akporo 11, na-emejuputa ọtụtụ ndozi ahụhụ na ihe ndị ọzọ na-ekwe nkwa iji melite ahụmịhe onye ọrụ na ekwentị.
1 LG V60 ThinQ 5G mechara nweta mmelite gam akporo 11
1.1 Njirimara nke LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G mechara nweta mmelite gam akporo 11
LG ngwa ngwa inye gam akporo 11 melite na mobiles ya. Naanị izu ole na ole gara aga, n'eziokwu, ndị LG Velvet 5G Ọ bụ ekwentị izizi dị na katalọgụ ụlọ ọrụ South Korea ịnabata OS na obodo ya. LG V60 ThinQ 5G bu ekwenti na enweta ya.
Ugbu a naanị ndị ọrụ ekwentị bi na United States nwere ngwungwu ngwa ngwa ọhụrụ, ya mere, erubeghị maka nbudata na ntinye na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa. Agbanyeghị, ekwesịrị ịmalite ya n'oge na-adịghị anya n'ụwa niile, ebe ọ bụ na ọ malitelarị ọkwa ntinye ya. Ihe ọzọ bụ na naanị ụdị Verizon na T-Mobile dị iche iche nke ekwentị na-enweta ya. AT & T ka ejidere.
Eziokwu ọzọ ị ga-eburu n'uche na nke ahụ bụ ezigbo ọchịchọ Ihe ngosiputa gam akporo 11 nke Verizon di iche iche na abia nke Jenụwarị 2021. N'aka nke ọzọ, nke T-Mobile na-abawanye ọkwa nke nche nche rue Febụwarị 2021, ya mere nke ikpeazụ a baara uru karịa n'echiche ahụ.
Ọ bụrụ na ị si na US ma ị natabeghị ọkwa nke mbata nke OTA ọhụrụ maka LG V60 ThinQ 5G na gam akporo 11, gaa na ntọala ntọala ekwentị, gaa na mmelite na ngalaba ngwanrọ, iji lelee ma ọ bụrụ na ị nweela nwee nke a.
Ihe a na-emebu: anyị na-akwado ka onye ọ bụla nwere ekwentị jikọọ na netwọk Wi-Fi kwụsiri ike ma dị elu, iji budata wee wụnye ngwungwu ngwa ngwa ọhụrụ ahụ, iji zere oriri achọghị nke ngwugwu data onye na-eweta ya. Ọ dịkwa oke mkpa inwe ọkwa batrị dị mma iji zere nsogbu ọ bụla nwere ike ime n'oge usoro nrụnye.
LG V60 ThinQ 5G abụghị ọdụ ochie. Emeputara nke a na February nke afọ gara aga ma nwee ihuenyo OLED nke na-enye ihe ngosi nke 6.8 sentimita asatọ, yabụ na nke a abụghị obere mkpanaka. N'aka nke ya, mkpebi ya bụ FullHD + nke 2.460 x 1.080 pikselụ, n'otu oge nke njupụta nke ndị a bụ 395 dpi na enwere iko Corning Gorilla Glass 5 nke na-echekwa panel ahụ site na nkwụsị na mmejọ dịgasị iche iche dị ka ọdịda.
Chipset processor na - ebi n’okpuru ekwentị a bụ Snapdragon 865 ama ama, SoC kachasị ike nke Qualcomm nke njedebe dị elu nke ọgbọ ikpeazụ na otu nke na-arụ ọrụ na oke elekere elekere nke 2.84 GHz. Na nke a, anyị ga-agbakwunye RAM nke 8 GB na ebe nchekwa dị n'ime nke ike 128/256 GB. Enwekwara batrị ikike 5.000 mAh nke dakọtara na Ndenye Ntanye 4.0 + ngwa ngwa na-ebu ọkụ ngwa ngwa.
Na ọkwa foto, ngwaọrụ ahụ na-abịa na sistemụ igwefoto atọ nke nwere ihe mmetụta 64 MP isi na oghere f / 1.8, oghere 13 MP ultra-wide angle na oghere f / 1.9 na 0.3 MP ToF shooter. Igwefoto selfie, ka ọ dị ugbu a, bụ mkpebi 10 MP ma nwee oghere f / 1.9. Fọdụ n'ime usoro sistemụ igwefoto bụ isi gụnyere ntinye vidiyo dị elu dị elu 8K.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gam akporo 11 na-abia LG V60 ThinQ 5G site na mmelite ohuru
Chọpụta ntụziaka ọhụrụ ma chọpụta ụlọ mkpọrọ dị na Alchemy Dungeon puzzle roguelike
Nke a bụ ihe kpatara Bill Gates ji eji gam akporo